माता पाथिभराले हामी सबैको कल्याण गरून्, हेर्नुहोस् कार्तिक २६ गते मंगलवारको राशी अनुसार तपाईंको भाग्य – दैनिक नेपाल न्युज
माता पाथिभराले हामी सबैको कल्याण गरून्, हेर्नुहोस् कार्तिक २६ गते मंगलवारको राशी अनुसार तपाईंको भाग्य
प्रकाशित द्वारा: मङ्लबार, कार्तिक २६, २०७६
मेषः– पूर्ण शान्तिको बातावरण अझै बन्ने छैन । फाइदा हुने काम कम हुनेछन् । काम गर्दा अरुको भनाई खानु पर्ने अवस्था आउन सक्छ सजग रहनुहोला । अरुलाई सहयोग बढि हुनेछ । फलदायी यात्राको सम्भावना देखिन्छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी भने नबढाउनु होला । व्यापार व्यवसायबाट थोरै आम्दानी हुनेछ ।
वृषः– आज पनि सयमले साथ दिने देखिन्न । सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण विग्रिनेछ । आफुले सोचे जस्तो कहि कतै हुने छैन । अनावस्यक झमेलामा आइलाग्ने छन् । जोखिम मोलेर कुनै काम नगर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट उचित मुनाफा लिन सकिने छैन । विश्वास गरेकाले धोका दिनसक्छन् । आशाहरु निरासामा परिणत हुनेछन् ।
मिथुनः– समयमा काम गर्नु होला ढिला सुस्ति गरेमा उपलब्धि गुमाउनु पर्नेछ । दायावायाँ नलागि समयको सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला । थोरै प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । आत्मिय जनको सहयोग मिल्नेछ । फलदायी यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ ।
कर्कटः–परिणाम मुखी कामको लागि तिव्र रुपमा इच्छाशक्ति बढाउनु होला । संघर्ष विना कहि केहि मिल्ने छैन । बाधा अवरोध खडा गर्न खोज्ने कम हुने छैनन । सवैलाई आफ्नो ठान्नु गलत हुनेछ । होशियार ! विश्वास घात हुनसक्छ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । गोपनियता अप्नाउन नभुल्नु होला ।
सिंहः– अलमलमा नपरि आफ्ना कार्य योजना लिएर अगाडि बढ्नु होला । समस्याबाट पन्छिएर टाढा बस्नु भयो भने उपलब्धि हात लाग्ने छैन । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । अरुको भर परेर काम नगर्नु होला । पढाई लेखाईमा बाधा अवरोध आउन सक्छ । अनावस्यक खर्च कटौती गरेर काम गर्नु होला नत्र भविष्य सुगम हुने छैन ।
कन्याः– देखिएका सम्भावना विलाउने छन् । अनुकुल बातावरणमा काम गर्न पाईने छैन । काम गर्ने जोश जागर घट्नेछ । समस्या घट्ने भन्दा बढ्ने देखिन्छ । दैनिक काम काजमा अवरोध आउन सक्छ । गलत विचार बढ्नेछ । खर्चालु काम बढि हुनेछन् । व्यापार घट्नेछ । सहयोग गर्ने भन्दा माग्ने बढि होलान् ।
तुलाः– दिन अनुकुल देखिन्छ । आफनै बाहुबलबाट आर्थिक उन्नति हुनेछ । आफ्नो काममा अरुको मुख ताक्नु पर्ने छैन । काममा ढिला सुस्ति नगर्नु होला आफैलाई घाटा हुनेछ । वित्तिय कारोवारमा सामान्य सुधार आउनेछ । आफुलाई ज्ञान नभएका क्षेत्रमा लगानी नबढाउनु होला । ईष्टमित्रको सामान्य सहयोग मिल्नेछ ।
वृश्चिकः– कसैलाई वचन नदिनु होला,वोल्यो कि पोल्यो । सफलता असफलता तपाई आफ्नै हातमा रहेकोछ । पठन पाठनमा कम ध्यान जानेछ । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । अरुलाई प्रयोग गरेर काम गर्नु भयो भने काममा सहजता आउनेछ । ऋण लगानी नगर्नु होला डुब्न सक्छ । व्यापारबाट अल्प लाभ हुनेछ ।
धनुः– हेलचक्र्याई नगर्नु होला,समग्रमा दिन अनुकुल देखिन्छ । विगतका कमि कमजोरी सच्याउने मौका मिल्नेछ । एजेन्सिका कामबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । पढाई लेखाईमा सामान्य प्रगति हुनेछ । कर्म गरेर भाग्य निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । आतिथ्यता ग्रहण गर्न पाईनेछ । साझेदारी काममा हात नहाल्नु होला ।
मकरः– समयले आज पनि साथ दिने देखिन्न । नयाँ काममा लगानी नबढाउनु होला । अरुलाई चाडो विश्वास नगर्नु होला धोका हुनेछ । व्यवसायमा अवनति हुनेछ । काम काजमा अवरोध आउनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा समस्या आउन सक्छ । सहयोग गर्ने भन्दा खुट्टो तान्ने बढि हुनेछन् । मिथ्या आरोप लाग्न सक्छ सतर्क रहनुहोला ।
कुम्भः–नोकरी तथा राजनीतिमा आँशिक सफलता मिल्नेछ । बढि लाभ लिनलाई हेलचक्र्याई नगरि काम गर्नु होला । विरोधी कमजोर हुनेछन् । मुद्धा मामिलामा जीत हुनेछ । लाभान्वित हुनुहुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट सोचे भन्दा राम्रो आम्दानी हुनेछ । सहयोग सामान्य खालको मिल्नेछ । आर्थिक कारोवारमा भने सतर्क रहनुहोला ।
मिनः–समयको सदुपयोग गर्नु होला उपलब्धि मुलक काम हुनेछन् । आफुले गरेका काम अरुका लागि उदाहरणीय हुन सक्छन् । आर्थिक उन्नति उच्च दरमा वृद्धि हुने देखिन्छ । मान्यजनको सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा नयाँ अवसर आउनेछ । इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ । रोकिएका काम धेरै जसो फस्र्योट हुनेछन् ।
माता पाथिभराले हामी सबैको कल्याण गरून्, हेर्नुहोस् कार्तिक २७ गते बुधवारको राशी अनुसार तपाईंको भाग्य
मेष Aries:- काममा विभिन्न अवसर पाइनेछ । समयमा सहि निर्णय लिन सक्ने क्षमताले अगाडी बढ्न मद्दत पुग्नेछ । अरुले आफ्ना कमजोरीप्रति गुनासो गर्न सक्छन । वृष Taurus:- रमाइलो जमघटमा सहभागी [...]
दलितको घरमा ‘गिरी बा’ पुजारी
पर्वत, २० मङ्सिर: अहिले पनि समाजमा छुवाछुत प्रथा पूर्णरुपमा हटिसकेको छैन । दलित समुदायका व्यक्तिले अझै पनि धेरै खालका जातीय समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । समाजमा उनीहरूप्रति गरिने व्यवहार नै [...]
बच्चा नहुने महिलालाई बच्चा हुने बनाइदिन्छु भन्दै यस्तो गरेपछि !
काठमाडौं । बिवाहित जोडिको बच्चा हुनु एक जैविक प्रकृया हो । यो प्रकृया असन्तुलित भए बच्चा नहुनसक्छ । यसका लागि चिकित्सा विज्ञानले केही उपायहरु समेत पत्ता लगाएको छ । तर [...]
पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन, हेर्नुहोस आजको राशिफल
मेष Aries:- सामान्य कामबाट राम्रो लाभ उठाउन सकिनेछ। लगनशीलताले महत्वपूर्ण काम दिलाउन सक्छ। मानसम्मान पनि पाइनेछ। वृष Taurus:- अध्ययन अध्यापनमा प्रगति हुनेछ। बोलीको प्रभावले धेरैलाई आकर्षित गर्नुका साथै सजिलै काम [...]
मेष Aries:- टाढाको यात्रा गर्ने मौका छ । दिगो फाइदा हुने काममा लगानी बढाउन सकिनेछ । पतिपत्नीबीच घरसल्लाह भने नमिल्न सक्छ । साथीभाईसंग मन प्रसन्न रहनेछ । वृष Taurus:- व्यापार [...]
काठमाडौँ, १८ मङ्सिर: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले जनकपुरधामस्थित रामजानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको छ । श्रीराम जानकी विवाह महोत्सव, २०७८ को अवसर पारेर [...]